ဘွရှင် (ခ) မြတ်သိန်းထွန်းအား ချေမှုန်းခြင်း (၃) | Ko Rohingya
ဘွရှင် (ခေါ်) မြတ်သိန်းထွန်းက “ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း”ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးများ ရေးသားနေတာ အခုဆိုရင် အပိုင်း (၈) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း လေ့လာ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာကို အမှားကြီး မှားနေလို့ ပြင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ဘွရှင်အနေနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်သင့်တာက “တိုင်းရင်းသားဘင်္ဂါလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း”ပါ။ ဒီလို ပြောလို့ အံ့သြသွားလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ တစ်ချို့ စာရှုသူက “ဟာဗျာ-ခင်ဗျားကလည်း ဘင်္ဂါလီက ဘယ်လိုလုပ် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရပြန်တာလဲ။ ထပ်ပြီးတော့ ရှုပ်အောင် လုပ်နေပြန်ပြီ” ပြောခဲ့ရင်ဖြင့် ကျနော်က “ရှုပ်အောင် လုပ်တာ ကျနော် မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းကို ဖျက်၊ သမိုင်းဖျောက်၊ သမိုင်းကို မှောက်၊ သမိုင်းကို ဗလက်ကာယကျင့်၊ သမိုင်းကို လိမ်နေတာက စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အလိုတော်ရိ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် ဘွရှင်လို လူစားတွေပါပဲ”လို့ လေးစားစွာနဲ့ ပြန်ဖြေပါရစေ။ ကောင်းပြီ။ ကျနော့အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဘင်္ဂါလီဟာ တိုင်းရင်းသားလို့ ဘယ်အထောက်အထားတွေနဲ့ ပြောရတာလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို တင်ပြပါ့မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အာဏာရအစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်ရီက လူမျိုးစုတစ်ရာ့တစ်ပါးဟာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အုပ်စုတွေထဲမှာ ပါဝင်နေကြောင်း မကြာခဏဆိုသလို မီဒီယာတွေမှာ ထပ်ကာဆင့်ကာ ပြောကြားခဲ့တာကို မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး သိရှိပြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မသိရှိသေးဘူးဆိုရင် လေ့လာလို့ရအောင် လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ ဌာနမှုး ဦးသိန်းလွင်ဦးက ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၄) ရက်နေ့မှာ VOA Burmese ရဲ့ Youtube Channel မှာ တင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အင်တာဗျူးထဲက အဓိကကျတဲ့ အချက်ကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
[[ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ နိုင်ငံသားအပြင် နောက်တခုက တိုင်းရင်းသားတွေ အမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့ကိစ္စတွေ။ ဒီနေရာမှာ ဟိုအရင်ကတော့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲ မှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော်ဒေသတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုပြီးတော့ ထည့်သွင်းပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာအသံ မြန်မာ့အသံကနေ အသံလွှင့်ပေးခဲ့တာတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်။ ဒီနောက်ပိုင်း မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာကို စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်ပြီးတော့ အခုအချိန်အထိလည်း ဒါ မြန်မာအစိုးရရဲ့  ရပ်တည်ချက်က ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ရပ် တည်ချက်မျိုးရှိတယ်။ တဖက်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေက သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပါဆိုပြီးတော့ ပြောနေတာတွေရှိတော့ ဝန်ကြီးရဲ့ အမြင်လေးက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဦးခင်ရီ ။ ။ ဒီမေးခွန်းမျိုးက ကျနော် မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော့်ဖက်က တရားဝင်ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာက ကျနော်တို့ လူမျိုးထဲမှာ မပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိကကျတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး (၈) မျိုး ရှိပါတယ်။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ချင်း – ဒီ (၈) မျိုး plus သူနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့ minority တွေပေါင်း လိုက်ရင် လူမျိုး (၁၀၁) ပါးလို့ ခေါ်တာပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မပါဘူး။ ကျနော်တို့မှာ အခုနပြောသလို လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သန်းခေါင်း စာရင်း နှစ်ကြိမ်ကောက် တယ်။ ၁၉၇၃ မှာ တကြိမ်ကောက်တယ်။ ဆယ်နှစ်ခြားပြီးတော့ ၁၉၈၃ တကြိမ်ကောက်တယ်။ အဲဒီရဲ့  ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုး ထည့်ရေးထားတာ မပါဘူး။ ဒီ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှီလူမျိုးနဲ့ စာရင်းသွင်းထားတယ်။
လွတ်လပ်ရေးမရခင် အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှကိုလိုနီအောက်မှာ ရှိတုန်းက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ gazette documents တွေမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ကျနော် ပြောတာကတော့ အထောက်အထားနဲ့ ပြောတာပါ။ အဲဒီလို အထောက်အထားနှစ်ခုအရ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးဟာ မရှိဘူး။ ဘင်္ဂလီ ဆိုတဲ့လူမျိုးပဲ ရှိတယ်။ ဒီ ဘင်္ဂလီ ကလည်း အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ၁၈၂၄ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်အနောက်ခြမ်း ဗြိတိသျှလက်အောက်ကိုရောက်တယ်။ ကျနော်တို့က အိန္ဒိယပြည်ရဲ့  ပြည်နယ်ခွဲ တခု ဖြစ် တယ်။ အဲဒီမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဲဒီဖက်ကရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ဒီဖက်ကိုလာပြီး အလုပ်လုပ်ရင်နဲ့ တချို့ လည်းပြန်ပြီးတော့ မထွက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါတွေက လွတ်လပ်ရေး နဲ့အတူ ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက် တွဲ ပြဿတွေဖြစ် ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးကတော့ မရှိဘူးလို့ တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီး ပြောလို့ပါတယ်။]]
စာရှုသူ ဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဦးခင်ရီက “ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိကကျတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး (၈) မျိုး ရှိပါတယ်။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ချင်း – ဒီ (၈) မျိုး plus သူနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့ minority တွေပေါင်းလိုက်ရင် လူမျိုး (၁၀၁) ပါးလို့ ခေါ်တာပေါ့”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးအကြောင်း ဆက်ပြီးတော့ နောက်ထပ်လင့်ခ်တစ်ခုကို ပေးပါအုံးမယ်။
Credit To: RFA Burmese Radio
ကောင်းပါပြီ။ ရှေ့ဆက်ပါ့မယ်။ ဦးခင်ရီဟာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ လက်ရှိ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီမူဝါဒပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းကို အဓိက ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင် လူကြီးတွေထဲမှာ ဦးခင်ရီဟာ အဓိကကျတဲ့ အာဏာပိုင် တစ်ဦးဆိုရင် မှားတယ်လို့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကနေ တရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး ဦးခင်ရီရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကန့်ကွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးခင်ရီဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒကို သေသေချာချာ နားလည်ခြင်း မရှိပဲ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုအတွက် တရားဥပဒေအရ ပြင်းထန်စွာ အရေးယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရရဲ့ တာဝန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုထက်ထိ ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက် တစ်စုံတစ်ရာ မထွက်လာသေးပါ။ အဲဒီအတွက် ဦးခင်ရီရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးဟာ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများဖြစ်တယ်လို့ သွားလေသူ စစ်အာဏာရှင် သားသတ်သမား တရုတ်ကပြား ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ လက်ထက်က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးမှာ ပါဝင်ကြောင်းကို အတည်ယူပြီး၊ ဒီဆောင်းပါးမှာ သုံးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးဟာ မည်သည့် လူမျိုးအုပ်စုတွေပါလဲ။ တနည်းအားဖြင့် လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါး စာရင်းပါ။ ဒီအချက်ကို တင်ပြရန် အထောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ သို့သော် အားလုံးကို ဒီနေရာမှာ မတင်ပြတော့ပါ။ တစ်ခုကိုသာလျှင် ကိုးကားတင်ပြသွားပါ့မယ်။ အဲဒီလို တင်ပြတဲ့အခါ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း လက်ခံထားတဲ့ ကျမ်းကို ကိုးကားတင်ပြသွားမှာပါ။ အဲဒီကျမ်းကတော့ ရမ်းဗြဲမြို့ တောင်ကျောင်းဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာလာလင်္ကာရ ရေးသားသော “ရခိုင် ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း”ပါ။ စာပြုသူဟာ ရဟန်းစာဆို တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Credit To: တို့ဗမာအစည်းအရုံး ဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာ(http://www.facebook.com/DobamaAsiayone)
ဘွရှင်လို လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တွေ အမှန်တရားကို မမြင်နိုင်အောင် ‘ကန်း’နေမှာ စိုရိမ်တဲ့အတွက် ထပ်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံမှာ မင်နီနဲ့ဝိုင်းပြီး ထပ်မံ၍ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit To: တို့ဗမာအစည်းအရုံး ဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာ (http://www.facebook.com/DobamaAsiayone)
ယခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရမ်းဗြဲမြို့ တောင်ကျောင်းဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာလာလင်္ကာရ ရေးသားသော “ရခိုင် ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း”လာ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးစာရင်းမှာ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ ပါရှိပါတယ်။ ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံတလွှားမှာ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှနွယ်ဖွားတွေ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အတွက် နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းက အများဆုံး ၀င်ရောက်အခြေချ နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီ လူသားတွေဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီးသားပါ။ တနည်းအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီတိုင်းရင်းသားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရလက်ထက် အဆက်ဆက်မှာ ဘင်္ဂါလီတိုင်းရင်းသားဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြုကာ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ချီးမြှင့်ခြင်း မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီထက်ဆိုးတာကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကိုပင် လက်လွတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခိုင်အမာ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတိုင်းရင်းသားလို့ ခေါ်မလား။ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ‘ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသား’လို့ ခေါ်မလား။ ဒါကတော့ မြန်မာပြည်လူထု တစ်ရပ်လုံးက ရွေးချယ်ကြရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ထပ်ဆင့်ပြီး တင်ပြချင်တာက “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်စကားလုံး ကိစ္စပါ။ ကျနော် ရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ “၁၈၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် “ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ” ရှိခဲ့ကြောင်းမငြင်း နိုင်သောသက်သေအထောက်အထား”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတိုလေးကို ပြန်ပြီး ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် “ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ” နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ၁၈၂၄ ခုနှစ် မတိုင်မီက ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မုစ်လင်မ် လုံးဝ မဟုတ်သူ အနောက်တိုင်းပညာရှင် သုတေသီ တစ်ဦး မှ ပြုစုရေးသားခဲ့သည့် စာတမ်းတစ်စောင်တွင် တွေ့ရှိရပေသည်။
ထိုစာတမ်း၏ ခေါင်းစဉ်မှာ “ဗမာ့အင်ပါယာအတွင်း ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြသော ဘာသာစကားအချို့၏ ဝေါဟာရ(များ)အား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire” ဖြစ်သည်။ ရေးသားခဲ့သည့် သုတေသီပညာရှင်မှာ Francis Buchanan-Hamilton ဖြစ်ပြီး၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၉၉ ခုနှစ်တွင် ရေးသား ပြုစုခဲ့သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၀၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ယင်းစာတမ်းအား အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိ Northwestern University ၏ စာကြည့်တိုက်ကြီးတွင် ငှားရမ်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ထိုတက္ကသိုလ်ကြီး၏ စာတိုက်၏ ၀ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
“ကျွန်ုပ်အနေနှင့် ယခု ဗမာအင်ပါယာအတွင်း ပြောဆိုသုံးနှုန်းနေခဲ့ကြသော ဒေသိယဘာသာစကား သုံးခုကို ပူးပေါင်း၍ တင်ပြပေမည်။ သို့သော် ထိုဘာသာစကားများသည် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ၏ ဘာသာစကား များမှ မြစ်ဖျားခံ ဆင်းသက်ခဲ့ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများအရ ဆိုနိုင်သည်။ ပထမဆုံး တင်ပြထားသည့် ဘာသာစကားမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် (အာရ်ကာန်ပြည်နယ်) အတွင်း ရှေးကပင် အခြေချ နေ ထိုင်ခဲ့ကြသော မဟာမေဒင်များ ပြောဆိုကြသည့် ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် သူတို့ကိုယ်ကို သူတို့ ရိုဟင်ဂျာ (၀ါ) ရခိုင်ပြည်နယ် (အာရ်ကာန်ပြည်နယ်)၏ တိုင်းရင်းသားများဟု ခေါ်ကြသည်။”
ဤစာတမ်းအား အစအဆုံး ဒေါင်း၍ ဖတ်လိုသူများ အောက်ပါလင့်ခ်များကို နှိပ်၍ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ကာ ဖတ်ရှုလေ့လာသုတေသန ပြုနိုင်ပေသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ခေါ်မှာလား။ သို့မဟုတ် ဘင်္ဂါလီတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ခေါ်မှာလား။ ဒါကိုပဲ မြန်မာပြည်သူလူထုက ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အထောက်အထားများအရ အသိဉာဏ်တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ သမိုင်းကို ဖျက်လိုဖျက်စီးပြုနေတဲ့ ဘွရှင်ရဲ့ “ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း”ခေါင်းစဉ်ဟာ မှားနေပြီး “ဘင်္ဂလီ တိုင်းရင်းသားများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း”လို့ ရေးသားမှသာ အမှန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့အနေနဲ့ အချိန်မရတာကြောင်း ၎င်းရဲ့ ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၊ လေ့လာတင်ပြလိုက်ရတာပါ။
လှည့်စားတတ်သူ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းမှားနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အလိုတော်ရိ ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အလိမ်အညာစက်ဝန်းများမှ လွတ်ကင်းကာ အမုန်းတရားများ ကွယ်ပျောက်၍ မေတ္တာတရား၊ အကြင်နာတရားဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်စေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျှက်
(၁) VOA Burmese, ၀န်ကြီးဦးခင်ရီနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်၊ အင်တာဗျူးသူ- ဦးသိန်းလွင်ထွန်း၊ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kxBbEluUwko
(၂) RFA Burmese, ၀န်ကြီးဦးခင်ရီနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်ချက်၊ အင်တာဗျူးသူ-ဦးကျော်ကျော်အောင်၊ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DAQK2eoX5Oo
(၃) ရမ်းဗြဲမြို့တောင်ကျောင်းဆရာတော် အရှင်စန္ဒမာလာလင်္ကာရ၊ ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဖဘစာမျက်နှာ၊
(၄) ဘွရှင် (ခေါ်) မြတ်သိန်းထွန်း၊ ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း(၃)၊ ၂၀၁၂၊ Arakanese၊ (၅) Francis Buchanan. “A comparative Vocabular of Some of the languages Spoken in the Burma Empire.” P.55. Also see Willem van Schendel (ed.)“Francis Buchanan in South East Bengal (1798): His journey to Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla,”p. 55.
(၆) ချမ်းမြေ့၊ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် “ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ” ရှိခဲ့ကြောင်းမငြင်း နိုင်သောသက်သေအထောက်အထား၊ ၂၀၁၂၊ ဓည၀တီ။
This entry was posted on February 7, 2013, in ရိုဟင်ဂျာ, သမိုင်း, ချေမှုန်းခြင်း and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, စစ်ခွေးများ, တိ/ကု အေးမောင်, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဘွရှင် (ခ) မြတ်သိန်းထွန်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သမိုင်း, သားသတ်သမား, ဦးခင်ရီ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး – ကျောက်ဖြူ	ရခိုင်ပြည်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် →